Fisandohana andraikitra :: Maorisiana tratra nisoloky olona an-jatony • AoRaha
Fisandohana andraikitra Maorisiana tratra nisoloky olona an-jatony
Voasambotry ny polisy, tamin’ny zoma lasa teo, ny lehilahy iray teratany Maorisiana noho ny raharaha fisandohana andraikitra sy fisolokiana amin’ny fandefasana olona hiasa any Maorisy. Voarohirohy miaraka aminy ny lehilahy Malagasy roa ka nentina natao famotorana ihany koa. Fantatra tamin’ny fakàna am-bavany sy ny fanadihadiana rehetra fa efa an-jatony ny olona voasolokin’io teratany vahiny io.
Nametraka fitoriana teny amin’ny polisy ny avy ao amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny fa misy olona manao taratasy hosoka sy fisandohana andraikitra mitondra ny anaran’ny minisitera. Milaza fa afaka mandefa olona miasa any Maorisy ary mampiasa ny tombokasen’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny ireo mpisoloky. Nanao ny fikarohana ny mpitandro filaminana.
“Fantatra fa teratany maorisiana no manao io taratasy hosoka sy fisandohana andraikitra io. Miara-miasa amina Malagasy izy amin’ny fanaovana ny tombokase. Tra-tehaka teny amin’ny gara Soarano, taorian’ny vela-pandrika natao, ilay Maorisiana”, araka ny fanampim-panazavana avy amin’ny polisy.
Misy avy any amin’ny faritra ireo lasibatra amin’ny fisolokiana. Efa niomana sy tonga eto an-drenivohitra avokoa izy ireo. Vola iray hetsy ariary isan’olona kosa no takian’ilay teratany vahiny amin’izany. Voatazona am-ponja vonjimaika eny Antanimora ilay Maorisiana sy ireo roa lahy niray tsikombakomba taminy.
Harom-paosy eny Analakely :: Ankizilahy enina noraofin’ny polisy